Baro AutoCAD Watch - Geofumadas
Baro arkaysid AutoCAD
Febraayo, 2012 AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS, Video
Maanta waxaa jira koorsooyin free dhowr AutoCAD internetka, iyadoo tani ma aynu ku talo jiraan inay nuqul dadaal iyo kulmi kale, laakiin halkii ay dhameystiraan qayb bandhigaysaa caqabad u dhexeeya koorsada sharraxaya oo qaynuunnadii iyo xaqiiqada dhabta ah ee user, kuwaas oo mar garanaya Taliyayaashu ma garanayaan halka laga bilaabo.
Mawduucan waa taxanaha fiidiyowga oo muujinaya sida qorshooyinka dhismaha ee guri loo sameeyo, tallaabo tallaabo ah. Dabcan wuxuu ku salaysan yahay versions AutoCAD hor 2009, si kastaba ha ahaatee macquulka qalliinka isku mid ah iyo mararka qaar fududeeyay qaar ka mid ah tallaabooyinka la imaatinka interface 2009 AutoCAD oo uu ku sugnaa ilaa AutoCAD 2013.
Waxaa cad in tallaabooyinka qaarkood lagu horumariyo si loo isticmaalo ujeedooyinka barbaarinta laakiin markaa isticmaalayaasha wakhtiga ka dambeeya waxay bartaan inay ku gutaan habab kale oo wax ku ool ah. Laakiin qof kasta oo raba in ka xoq bartaan AutoCAD tani waxay noqon kartaa koorso AutoCAD free, fiican ee macquulka ah waxaa loola jeedaa ka shaqeeya diyaarad wax dhisid ah.
Kadib si aan u cusboonaysiiyo laftigeeda waxaan soo jeedinayaa Koorsada AutoCAD 2012 ee tusaalayaasha muujinaya sida amarrada cusub iyo qaabka muuqaalka qaabka isbeddelka.
Si aad u furtaan waxaan u qaadnay oggolaanshaha lagama maarmaanka ah, sababtoo ah waxay ka tirsan yihiin koorso hore loogu iibiyey CD. Inkasta oo kaliya fiidiyowyada lagu daray, iyada oo aan maqal ah.
Waxyaabaha soo socda ayaa soo koobaya waxa fiidiyowyadani u taagan yihiin, iyaga oo kala soocaya midabada, marka la eego marka loo adeegsado markii ugu horeysay:
Midabka madow abuurka ayaa amar ku bixinaya
In ay casaanto amarro edbinta
Qalabyada dheeraadka ah ee cagaaran.
Qawaaniintu weli waa isku mid sida qodobka aan ka hadlayo waqti hore: Taasi waxay suurtogal u tahay in ay bartaan AutoCAD oo keliya hawlgalka 25 amarrada; inkastoo horumarinta layliga loo baahan yahay oo kaliya abuurkii 8, 10 tafatirka, SNAP ee tixraaca iyo 6 korontada. Kuwa lagu soo koobay baraha soo socda:
Run ahaantii waa AutoCAD in la bilaabo, waxyaabo kale oo badan ayaa laga bartay marka dambe; sidoo kale diiradda tani waa qorshooyin waxtar leh, taakuleynta ballaadhnimada ayaa ku lug leh amarrada kale, 3D waxay qaadan doontaa wax kale. Laakiin waxaannu u adeegnaa khayraadka kuwa doonaya inay ogaadaan waxa AutoCAD u shaqeynayo iyo sida loo dalbado mashruuc dhisme ah.
Amarradan laguma darin liiska roonaan, kudhaw, digsi, badbaadin, dabacsan, kuwaas oo ah isticmaalka dhamaystiran ee shaqada oo dhan.
1. Abuurista lakabyada, feerooyinka iyo darbiyada
Talooyinka loo isticmaalo:
lakabka (1), si loo abuuro lakabyada: Feerada, derbiyada, albaabada, dhulalka iyo daaqadaha.
Goobo (1), si aad u sameyso hab u socodka aagga shaqada.
Khadka (2), si loo raad raaco axsaabta dibadda
Dheecaan, si loo raad raaco fiilooyinka gudaha
Goobta (1), si loo xoqo shubka xad-dhaafka ah
Lengthen (2), si loo kordhiyo axooyinka
Mline (3), si aad u sawirto derbiyada
Muddada: 20 daqiiqo.
2. Abuurista boodhka albaabada iyo daaqadaha derbiyada.
Explode (3): Laga dhejiyo derbiyada badan ee derbiyada
Dhar, si loo baabi'iyo hadhaaga hadhay ee isgoysyada
Kordhinta (4), si loo kordhiyo khadadka qaarkood
Fillet (5), si ay u sameeyaan xariiqyada jarista dhammaadka, isticmaalaya raadiyaha = 0
Khadka, si loo daro khadadka qaar ka mid ah meelaha banaan
Isku day inaad sameyso qaar ka mid ah xariiqyada derbiyada
Goobo, si loo raad raaco cirifka darbiga qafiifka ah
LTS (2), si aad u aragto qaabka xarriiqyada, adoo ku hagaajinaya 0.01
Muddada: 18 daqiiqo
3. Abuuridda albaabada iyo daaqadaha.
Xariiq, bakhti, goobaabin iyo jarjar, si aad u sawirtid albaab.
Block (4), si loo abuuro block.
Explode, si aad u baddesho block ka mid ah mid jira
Erase (6)si loo tirtiro
Geli (5)si aad u geliso albaabbada albaabbada.
Mirror (7)si loo abuuro nuqullo asal ah oo albaabada ah.
Khadka, Mline si aad u sawirtid daaqadaha
Array (6), si aad u sawirto daaqada derbiga leexsan.
Muddada: 21 daqiiqo
4. Dharbaaxada iyo dabacsanaanta dhulka
Layer, si loo abuuro lakabyo: heerka, alaabta guriga iyo dabaqa.
Khadka, si aad u sawirtid jilicsanaanta dhulka iyo xidhitaanka.
Muddada: 6 daqiiqo.
5. Sawiridda nadaafadda fayadhawrka.
Layer, si loo abuuro lakabka alaabta nadaafadda.
Khadka si aad u sawirto xariiqda wasaarada jikada
Xarunta Design (3), si aad u gashatid qaybo ka mid ah lavatastos, musqusha, musqusha, tuulada.
Meelaha, xariiqa, jarjar si aad u sawirtid alaabta guriga.
Muddada: 8 daqiiqo
6. Sawiridda alaabta kale.
Xarunta Naqshadaynta si aad u geliso qoryaha dabka, qaboojiyaha, qolka qadada.
Nuqul (8) Dhaqdhaqaaq (9), Soo rog (10)si aad u guurto una beddesho nuqulada alaabta guriga.
Xarunta Naqshadaynta si aad u geliso sariiro iyo baabuur.
Khad, waxaan u soo jiiday inaan sawirro daaqad udubdhigtay.
Muddada: 11 daqiiqo
7. Goobaha shoogga iyo dhirta dhejiska
Layer si loo abuuro lakab dhirta iyo bay'adaha.
Hatch (7)si uu u gubo shoogga on dabaqyada iyo cawska.
Xarunta Design si ay u geliso dhirta, baadiyaha beerta iyo calaamadda waqooyiga.
xiro si aad u buuxiso derbiyo adag.
Muddada: 23 daqiiqo.
8. Ku qorista qoraalada qotada dheer.
Dtext (8) si ay u sawiraan qoraallada
Text style si loo abuuro qaab qoraal ah, adoo isticmaalaya Miiska hantida (4)
Nuqul, u gudub qoraalka qoraallada ku salaysan mid hadda jira
Qalabka Maqaarka (5) si aad nuqul uga qaadato hal xaraf oo kale.
Muddada: 7 daqiiqo
Dimension Style (6), sameynta qaab ka samaysan tusaale tusaala iyadoo la isticmaalayo miiska guryaha.
Ku xayirnaanta isticmaalka qaabab kala duwan, qumman, joogto ah, roon, hogaamiye.
Muddada: 16 daqiiqo
Daabacaadda (7) qaabeynta daabacaadda ee qaabka
Muddada: 7 daqiiqo.
11. Daabacaadda, qaybta labaad.
Dejinta daabacaadda ee qaabeynta
Muddada: 6 daqiiqo
Intaa waxaa dheer, in ka egeomates channel YouTube, waa sharaxaadda videos amarka kale kaabaha iyo labo ka mid ah cutubyada hordhac ah soo bandhigay sida bar 25 abuuro amarradiisa iyo midabka asalka AutoCAD qaabeynta.
Halkan ayaad soo dejisan kartaa dwg file diyaaradda.
Haddii aad aragto macnaha buugan waxtar leh, waad awoodi kartaa iska qor in xisaabta Youtube our, kaas oo aan si rasmi ah u soo jeedin leh maqaalkan.
Post Previous«Previous Gabriel Ortiz, Cartesia iyo Geofumadas waxay ku biiraan Project Z! Meelaha
Post Next Luuqeeyo in Google Earth, ka wadataa UTMNext »
5 Jawaab in "Baro AutoCAD Watching"
ivan isagu wuxuu leeyahay:
waad ku mahadsantihiin caawinaad laakiin waxaan jeclaan lahaa in aan wax yar ka ogaado
Jaime Carrillo isagu wuxuu leeyahay:
run ahaantii aad u fiican ... iyo xataa si fiican tan iyo markii aan aragnay videos iyo codka badani in AutoCAD badan oo dareenka ...... waad ku mahadsan tahay geliya sababtoo ah waxaan jira dad badan oo aan la bilaabin daraasaddan iyo ma nihin kuwa khubarada laakiin ...... alla timaado iyadoo la kaashanayo aad ee ... .queria uma sheegi inay soo aragto width iyo dhererka in diyaarada ama in waa malo ... ..thank ...... .jaime
VICTOR SOLIS isagu wuxuu leeyahay:
aad u fiican, gaar ahaan kuwa leh waayo-aragnimo yar oo ka mid ah autocad, ugu hooseeya ee aad adigu nagu siiso, waxaan u mahadcelinayaa koorsooyinkan caawiya waxyaabo badan oo dadka iila mid ah.
Juan Manuel Libreros González isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan doonayay inaan iska qoro YouTube-ka anigoo raacaya isku xirka 'subscribe' oo aanan sameyn karin, haddii ay leeyihiin qaab kale, waan u mahadcelin doonaa, maadaama aan xiiseynayo inaan sii wado barashada Autocad, labadaba 2D iyo 3D.
Saaxiibkaaga: Manuel Libreros
Jorge Gómez isagu wuxuu leeyahay:
Sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaan arko koorso loogu talagalay MicroStation, maaddaama ay aad ugu adag tahay in la helo marka loo eego kuwa AutoCAD.
Marka la eego, koorsadu waa mid aad u wanaagsan.